नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालसंग नेपाली बहसका लागि पत्रकार ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारण र आधारहरु के–के छन् ?
हामीले यो प्रस्ताव दर्ता गर्दा विभिन्न खालका कारणहरु उल्लेख गरेका छौं । त्यसमा मुलत ईमानदारीपूर्वक आप्mनो पदीय आचारणविपरित काम गरेको रहेको छ ।
उहाले पदीय आचरण विपरित के–के काम गर्नु
हामीले यो विषयलाई उठान गर्दा अन्तरिम संविधानको प्रावधानलाई आधार मानेर अहिले संविधान जारी भएपछि पनि त्यसको विपरित विभिन्न विश्वविधालयमा हस्तक्षेप गरेको, किस्ट मेडिकल कलेजमा जबरजस्ती सिट संख्या थपेको र परिक्षामा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको । भ्रष्टाचार ऐनलाई प्रयोग गरेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अनावश्यक दुःख दिएको, र उहँसग असहमत हुने पक्ष र व्यक्तिहरुलाई खोजी खोजी प्रतिशोध साधेको पाईएको छ । अदालतको म्याद तामेलीमा भएको अवरोधहरु लगायतका दर्जनौं विषयहरु छन् । संवैधानिक निकायको प्रमुखको हैसियतभन्दा बाहिर गएर पदिय आचारण देखाएकोले संवैधानिक ट्याकभन्दा बाहिर जाने स्थितिमा हामीले विधिको शासनको लागि यो प्रयोजको लागि यो प्रस्ताव ल्याएका हौं ।
महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नको लागि तपाईहरुसग संख्या पुग्छ ?
पार्टीको संख्याको कुराभन्दापनि मुलुकमा भएको भयावह अवस्था संवैधानिक निकायको प्रमुखले जुन किसिमको त्रास फैलाउने काम भएको थियो, यसमा अहिले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका साथीहरुको तर्फबाट महाअभियोग प्रस्ताव बुझाईयो भन्ने हिसावबाट गणितलाई त्यो ढंगबाट हेर्नुहुन्न ।
संसदीय व्यवस्थामा गणितको महत्वपूर्ण प्रभाव हुन्छ नि ?
प्रभाव हुदैन भनेको होईन । अन्तिममा निर्णायक भनेको नै गणित हो नि । त्यो हिसाबकिताब हामीसग छदैछ । यो विषयवस्तु सार्वजनिक विषय हो । हामीले यो दर्ता गराउनुपुर्व नेपाली काग्रेसग पनि कुरा भएको छ ।
उसो भए नेपाली का“ग्रेससंगपनि यो विषयमा कुरा भएको छ ?
नेतृत्व स्तरबाट यो विषयमा कुरा भएको छ । विना जानकारी यो विषय आएको होईन ।
प्रस्ताव पारित गराउने उद्देश्यले नै आएको हो त ?
आशा गरौं । यो विषय संवैधानिक व्यवस्था भएकोले यो विषय कुनै हालतमा असफलतामा जानु पनि हुँदैन । र यो विषय असफलतामा पुग्दैन भन्ने विषयमा म चाहीँ कम्तिमा पूर्ण विश्वस्त
यो प्रस्ताव असफल भयो भने संसदीय व्यवस्थाका विभिन्न प्रक्रियाहरु नै असफल हुन्छ भन्ने तपाईको आशय हो ?
त्यो भन्दापनि राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार यो विषय उठेको हो । त्यसैले यो विषय आएको र यसले मूर्त रुप लिन्छ ।
कँग्रेसले चाहेन भने यो प्रस्ताव के हुन्छ त ?
त्यसमा कुनै शंकै छैन नि । एक तिहाई भएको पार्टी नेपाली काग्रेस हो । उसको समर्थन विना यो प्रस्ताव पास हुँदैन भन्ने विषयमा हामी जानकार छौं ।
उसो भए अख्तियार प्रमुख कार्की निलम्बनमा परेपछि अब उहाँले कुनै काम गर्नु पाउनुहुन्न, होईन र ?
यो प्रस्ताव दर्ता भैसकेपछि अब उहाले कुनै कामकारवाही अघि बढाउन पाउनुहुदैन । यो चाही संवैधानिक किटानीको व्यवस्था
संविधान संशोधनको विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तपाईको पार्टीसंग केही सहमति गर्नुभएको हो र ?
प्रधानमन्त्रीले संसदमा बोल्दा म त्यही थिए, उहँले बोलेको कुरा मैले सुनें । उहँहरुवीच संविधान कार्यान्वनयको बारेमा नेतृत्वको लेभलमा कुराकानी भैरहेको छ । चुनाव गर्नेबारेमा पनि छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीको अध्यक्षवीच कुराकानी भएको कुरामा सत्यता छैन ।